Manyoro Anosungirwa Iwe Unoda Kuunganidza Kuti Utengese Imba Yako | Bezzia
Mapepa anodiwa aunoda kuunganidza kuti utengese imba yako
Maria vazquez | 23/11/2021 12:00 | Musha
Uri kuda kutengesa imba yako? Ipapo iwe unofanirwa kuziva kuti kune nhamba yakakosha yezvinyorwa izvo zvinokurudzirwa kuunganidza. Zvimwe zvinodikanwa kana uchiisa ad pane real estate portals, vamwe panguva yekutengesa uye vamwe vanogona kukubatsira kutengesa imba yako.
Kuziva kuti ndeapi magwaro, izvo zvinosungirwa uye izvo zvisiri izvo, uye kupi kuti uzviwane zvichabatsira kugadzirisa maitiro, kudzivirira kumirira uye kukuisa iwe munzvimbo yakanaka mumeso emutengi. Nhasi, tinotarisa pamagwaro anosungirwa, izvo zvicharatidza, pakati pezvimwe zvinhu, kuti ndiwe muridzi wemba iyoyo uye kuti haibhadharwi.
1 Nyore registry note
2 Energy certificate yeimba
3 Real Estate Mutero
4 Chitupa chezvikwereti neCommunity of Neighbours
5 Kuvaka Technical Inspection Certificate (ITE)
6 Chitupa chekugara
7 Tengesa script
Nyore registry note
Iri gwaro rine ruzivo rakabudiswa neProperty Registry rinoratidza muridzi wemba, maitiro makuru eimba, pamwe chete nemamiriro ayo epamutemo. Kureva kuti, inoudza mutengi weramangwana machaji anobvira, encumbrances kana zvipingamupinyi zvekushandisa izvo chivakwa chingave nacho, senge remba remba, usufruct kana chikwereti chemutero.
Igwaro rinowanzokumbirwa nemutengi uye kuti notary inoda mazuva isati yasaina. Unogona kuikumbira nemuviri, asiwo online kuburikidza ne webhusaiti yeAssociation of Property Registrars kana mune registry app.
Energy certificate yeimba
Inodiwa kana uchiisa shambadziro pane real estate portal uye zvakare inosungirwa kuti uipe panguva yekusaina kubva munaChikumi 1, 2013. Kuti uiwane unofanirwa hidza nyanzvi yakatenderwa kuti mushure mekuongorora imba yako buritsa chitupa.
Real Estate Mutero
Iyo IBI ndiyo real estate taxs, mutero unobhadharwa nevaridzi vedzimba vese nekuda kwekuva nemba. Chitupa ichi chinoratidza kuti tiri kufambirana nekubhadharwa kwemutero wataurwa. Zvinonakidza kuzviratidza munhaurirano kutengesa imba yako uye inosungirwa panguva yekutengesa.
Chitupa chezvikwereti neCommunity of Neighbours
Mutariri wekuvaka, nemvumo yemutungamiri wenyika, achapa iyo chitupa chinoratidza kuti uri kuenderana nekubhadhara kwako. Inofanira kuodha mavhiki maviri isati yasvika, kunyanya, yezuva rekusayina. Rangarira kuti kana paine zvikwereti nenharaunda, mutengi achave nemhosva kune izvo zvinoenderana negore razvino uye makore matatu asati atenga.
Kuvaka Technical Inspection Certificate (ITE)
Gwaro iri rinosimbisa mamiriro ekugara papurazi panowanikwa furati kana imba uye iripo zvinosungirwa kune zvivakwa zvinopfuura 15, 30 kana 45 makore, zvichienderana neAutonomous Community. Munyaya yeimba yemhuri imwe chete, iwe uchafanirwa kuzvibata iwe pachako. Mune zvimwe zviitiko zvese, unogona kuikumbira kubva kumutungamiri wenharaunda, maneja wenzvimbo kana horo yedhorobha.
Gwaro iri rinopupurira kuti imba inosangana ne zvinodikanwa zvekugara zvakatemwa nemutemo Zvinosungirwa munharaunda pfumbamwe dzinozvimiririra: Asturias, Balearic Islands, Cantabria, Catalonia, Valencian Community, Extremadura, La Rioja, Murcia neNavarra. Kana unacho uye chiri chemazuva ano, unogona kuchikumbira kuHofisi Yedzimba kana kuti kuHoro yeTaundi; Kana isiri yazvino, iwe unofanirwa kuhaya technician kuti aongorore imba yako uye atumire zvinyorwa kune inoenderana manejimendi.
Panguva yekutengesa ichave yakakosha kuendesa izvi chibvumirano chawakasaina pawakatenga imba kuti wava kuda kutengesa.
Aya ndiwo magwaro anosungirwa anozodiwa kwauri kuti ukwanise kuvhara kutengesa kwemba yako. Mazhinji maitiro ari nyore, kunyange achidhura, maitiro. Vamwe, kunyanya avo vanoda kushanyirwa nenyanzvi, zvisinei, zvinonakidza kuvakumbira pachine nguva kuti varege kuzotikurira gare gare.
Sezvatakambotaura pakutanga, kune zvakare mamwe magwaro ayo zvichave nyore kuvepo panguva yekutenga nekutengesa maitiro. Zvinyorwa izvozvo ichavaka kuvimba nemutengesi uye izvo zvinogona kukubatsira kutengesa imba yako nekukurumidza. Tichakuudza nezvavo mumavhiki maviri. Iwe unongofanira kuterera kune peji redu kuti upedze ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mapepa anodiwa aunoda kuunganidza kuti utengese imba yako
Makumi Matatu Nhau Dzakabudirira sei mune Yazvino Series
Green bhinzi ine tofu uye muto unopisa